WINDOWS 10 OGE NKWỤSỊ - WINDOWS - 2019
Windows 10 Oge Nkwụsị
Na Windows 10, a na-enye njikwa ndị nne na nnabata iji belata iji kọmputa, mmemme mmemme, na ịgọnahụ ohere na saịtị ụfọdụ. M dere banyere nke a na ngwa Windows 10 Nne na Nna (ị nwekwara ike iji ihe a iji setịpụ oge oge kọmputa. ndị ezinụlọ gị, ma ọ bụrụ na nhụjuanya ndị a kpọtụrụ aha n'okpuru adịghị agbagwoju gị anya).
Ma n'otu oge ahụ, a ga-ahazi mgbochi ndị a naanị maka akaụntụ Microsoft, ọ bụghị maka akaụntụ mpaghara. Na nkọwa ọzọ: mgbe ị na-elele ọrụ njikwa ndị nne na nna, Windows 10 chọpụtara na ọ bụrụ na ịbanye n'okpuru akaụntụ nchịkwa nwatakịrị ahụ, na n'ime ya na ntọala akaụntụ ma mee ka akaụntụ mpaghara dị na akaụntụ Microsoft, njikwa njikwa ndị nne na nna kwụsị ọrụ. Hụkwa: Otu esi egbochi Windows 10 ọ bụrụ na onye agbalịrị ịkọwa paswọọdụ.
Ihe nkuzi a na-akọwa otu esi egbochi iji kọmputa Windows 10 maka akaụntụ mpaghara site na iji akara iwu oge. Ọ gaghị ekwe omume igbochi mmebi nke mmemme ma ọ bụ ịga na saịtị ụfọdụ (yana ịnata akụkọ banyere ha) n'ụzọ dị otú a, a pụrụ ime nke a site na iji nchịkwa ndị nne na nna, ngwanrọ nke atọ, na ụfọdụ ngwa-arụ ọrụ nke usoro. Na igbochi saịtị ma malite mmemme site na iji ngwaọrụ Windows nwere ike ịbụ ihe bara uru. Otu esi egbochi saịtị, Nchịkọta Nchịkọta Obodo nke ndị na-amalite (isiokwu a machibidoro mmebi nke ụfọdụ mmemme dị ka ihe atụ).
Idebe oge maka akaụntụ Windows 10 dị na mpaghara
Mbụ ị chọrọ akaụntụ njirimara mpaghara (onye na-abụghị onye nchịkwa) maka ihe mgbochi ndị a ga-edozi. Ị nwere ike ịmepụta ya dị ka ndị a:
Malite - Nhọrọ - Akaụntụ - Ezinụlọ na ndị ọrụ ndị ọzọ.
Na "Ngalaba ndi ozo", pịa "Tinye onye ọrụ maka kọmputa a."
Na windo arịrịọ arịrịọ, pịa "Enweghị m data ịbanye na onye a."
Na window ọzọ, pịa "Tinye onye ọrụ n'enweghị akaụntụ Microsoft".
Dejupụta ozi onye ọrụ.
Omume maka mwube iwu ka achọrọ site na akaụntụ na ikike onye nchịkwa site n'itinye akara iwu na nnọchite onye nchịkwa (nke a nwere ike ime site na nri aka nri na bọtịnụ "Malite").
Iwu e nyere iji setịpụ oge mgbe onye ọrụ nwere ike ịbanye na Windows 10 yiri nke a:
njirimara njirimara ejiji / oge: ụbọchị, oge
Na iwu a:
Aha njirimara - aha aha njirimara onye Windows 10 maka njedebe ndị a.
Ụbọchị - ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị n'izu (ma ọ bụ nso) ị nwere ike ịbanye. A na - eji okwu nchịkọta nke ụbọchị (ma ọ bụ aha ha dum): M, T, W, Th, F, Sa, Su (Monday - Sunday, respectively).
Oge oge na HH: Ọdịdị MM, dịka ọmụmaatụ, 14: 00-18: 00
Dịka ọmụmaatụ: ịkwesịrị igbochi ịbanye n'ụbọchị ọ bụla n'izu naanị ná mgbede, malite na 19 ruo 21 awa maka onye ọrụ ahụ. Na nke a, jiri iwu ahụ
net user relon / oge: M-Su, 19: 00-21: 00
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị ga-ezipụta ọnụ ọgụgụ dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, ntinye ga - esi site na Monday ruo Friday site na 19 ruo 21, na Sunday site na 7:00 ruo 9 elekere, a pụrụ ide iwu ahụ dị ka ndị a:
net user remont / oge: M-F, 19: 00-21: 00; Su, 07: 00-21: 00
Mgbe ịbanye n'ime oge ọzọ karịa onye e nyere ikike site na iwu ahụ, onye ọrụ ahụ ga-ahụ ozi ahụ "I nweghị ike ịbanye ugbu a n'ihi nkwenye akaụntụ gị. Biko gbalịa ọzọ mgbe e mesịrị."
Iji wepu ihe niile si na akaụntụ ahụ, jiri iwu ahụ aha njirimara njirimara / oge: all na akara iwu dị ka onye nlekọta.
N'ebe a, ma eleghị anya, ihe niile bụ otu esi egbochie ịbanye na Windows n'oge ụfọdụ na-enweghị Windows 10 njikwa ndị nne na nna. Otu ihe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ iji wụnye naanị otu ngwa nke onye ọrụ Windows 10 nwere ike ijikwa (ọnọdụ kiosk).
N'ikpeazụ, ana m achọpụta na ọ bụrụ na onye ọrụ maka onye ị na-edebe ihe ndị a ka ọ maara nke ọma ma mara otú ị ga-esi jụọ Google ajụjụ ndị kwesịrị ekwesị, ọ ga-enwe ike ịchọta ụzọ iji kọmputa ahụ. Nke a na-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ọ bụla nke ụdị mgbochi a na kọmputa kọmputa - okwuntughe, usoro nchịkwa ndị nne na nna na ihe ndị yiri ya.